Soo dejisan One Click Root 1.0.0.3 – Vessoft
WindowsMultimediaTelefoonkaOne Click Root
Bogga rasmiga ah: One Click Root
Mid ka mid ah xididkii Click – software ah in la siiyo xuquuqda maamulka oo dhan ka saaraan xayiraad ka qalabka Android. Software waxa uu tilmaamaa qalab ku xiran computer iyo rakibtay darawallada loo baahan yahay si loo hubiyo in shaqada tayada ka kooban qalab dhan ah. Ka dib markii update darawallada, One Root Click abuuraa gurmad ah ee xogta iyo cancels xanibaad ah ee awoodda qalab, sidaasuu u ogolaanaya inay dhidibbada u aasto codsiyada oo la socon karin adeega Google ee, kor version ee Android iyo in la yareeyo culayska ku processor ama kaadhka xusuusta. Mid ka mid ah xididkii Click sidoo kale awood u si meesha looga saaro faylasha xaasidnimo, sinaba meel iyo kordhinta wax-qabadka qalabka.
Hel marin buuxa u hesho waxyaabaha qalabka
Wanaajinaysaa qaab ka mid ah qalabka
Soo dejisan One Click Root
Faallo ku saabsan One Click Root
One Click Root Xirfadaha la xiriira